Архивы Ebe ị ga-aga na SEA - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Category: Ebe aga na SEA 0
DFA ọ na-ekwe ka ndị chọrọ ịbanye? Naanị ihe ndị dịpụrụ adịpụ na ihe mberede ka a na-anabata na ije ije na Courtesy Lane na DFA Aseana na ụlọ ọrụ Consular ndị ọzọ na…
Ọ ka mma ịnọ na Hoi An ma ọ bụ Da Nang? Mgbe ndị ọbịa na-ahọrọ Hoi An mara mma karịa Da Nang, ha na-ekwu na ọ bụ n'ihi na ha na-ahụ…
McDonalds niile bụ halal? Azụmahịa nri ngwa ngwa gụnyere. McDonalds, KFC, agụụ na-agụ Jacks, Red Rooster, ụzọ ụgbọ oloko, Domino niile na-eji ọkụkọ na cheese nwere asambodo halal, n'agbanyeghị na ọtụtụ…
Philippines nwere ụdị ihu igwe ise: oke ọhịa mmiri ozuzo, oke mmiri ozuzo, savanna okpomọkụ, iru mmiri na oke osimiri (ha abụọ nọ n'ebe dị elu) nke nwere oke okpomọkụ, mmegbu…
Ọktoba ruo Disemba (Fall) bụ oge kachasị mma iji gaa na Halong Bay na oge kacha elu maka ihu igwe dị ụtọ na ohere mmiri dị ala, n'agbanyeghị na ị nwere ike…
Enwere ihe dị ka ụdị osisi vaskụla 8,500 na Peninsular Malaysia, yana 15,000 ọzọ na East. A na-eche na oke ọhịa nke East Malaysia bụ…
Ee. Ọ bụrụ na ị na-eche maka njem Singapore naanị, ị nweghị ike ịhọrọ obodo dị mma iji gaa. … Ọ dị ọcha, dị oke nchebe yana ọmarịcha obodo…
Dama bụ egwuregwu a na-eme n'ọwụli elu na Philippines. N'ime ya, ihe nkedo eze nwere ike ijide n'otu akụkụ. 5 × 5 grid nke…
Ókè efere efere a na-arụ ọrụ nke ukwuu gbatịrị n'akụkụ abụọ nke agwaetiti Philippine, site na Luzon dị n'ebe ugwu ruo agwaetiti Celebes dị na ndịda. … Mwepu nke…
Usoro a nwere ike were ebe ọ bụla site na 1 ruo afọ 10 iji gbasaa site na usoro ụlọ ikpe Philippine na-adị nwayọọ ma na-ebu ibu, na-efu opekata mpe $ 4,800 (gburugburu P250,000). Ebe ọ bụ na…
1 2 ... 513 Osote
Azịza ngwa ngwa: Ndị mba ọzọ nwere ike ịbanye na Philippines Machị 2021?
Vietnam ọ dị nchebe pụọ na ọdachi ndị na-emere onwe ya?
Kedu ihe ntinye aka nke ụlọ ọrụ ọrụ na Philippines?
Ala ọ dị ụkọ na Singapore?
Kedu ihe bụ Khao Omo na Thai?
Kedu ihe bụ isi ihe ọkụkụ na-ebupụ na Philippines?
Ònye ka e weere dị ka nna nke Rondalla na Philippines?